Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Mareykanku tababaray oo weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada dowladda Soomaaliya ee Mareykanku tababaray oo weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose
January 15, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee Mareykanku tababaray oo weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay tababareen Mareykanku oo loo yaqaan “Danab” ayaa shalay galab oo Sabti ahayd weerar ku qaaday saldhig ay Al-Shabaab ku leeyihiin tuulada Yaaq-doomaar ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Ilo-wareedyada ayaa sheegay in ka badan 500 askari oo Danab katirsan in ay ka qeybgaleen weerarka ka dhanka ahaa maleeshiyada.
Ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha dowladda Soomaaliya oo ku saabsan weerarkaas.
Ma cadda haddii ay jiraan khasaare ka dhashay weerarka.
Sanadadii dhawaa ee lasoo dhaafay, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga AMISOM ayaa kordhiyay weeraradooda koonfurta Soomaaliya ee ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab.